Ipasta yesoseji etshizi (imbiza enye) - Iiresiphi
Imithetho Imiba Ye Babhali
Umgangatho Cleaning Tips
Igadi Imiboniso Yesilayidi
Iikholeji Imiboniso Bhanyabhanya
Ipasta yesoseji etshizi (imbiza enye)
Le recipe ye-cheesy creamy pasta ye-pasta yenziwe kwimbiza enye nje!
Ngepasta ethambileyo, iintlobo ezi-3 zesonka samasi, kunye nesoseji yase-Italiya enencindi, esi sidlo sasinencasa eninzi, kwaye sifuna ukucocwa kancinane!
I-Pasta yePot enye
Le recipe yenziwe kwibhodwe enye, oku kuthetha ukungcola okuncinci.
Siyayithanda indibaniselwano yesoseji eqholiweyo kunye nesosi yetshizi.
Sebenzisa nayiphi na ipasta ephakathi oyithandayo. Imifuno inokongezwa kumxube kwakhona.
Esi sidlo sifudumeza kakuhle kwisidlo sasemini (yongeza i-splash yobisi phambi kokufudumeza).
Izithako kwi-Cheesy Sausage Pasta
I-pasta yesoseji ihlala inesoseji yaseTaliyane kwisosi esekwe kwitumato. Sithanda ukuba le recipe ihluke kancinci kunye nekhrimu Itshizi mac kunye nesimbo samasi isosi.
ISOSEYIJI: Isoseji yaseNtaliyane inikeza i-fennel encinci kunye ne-oregano flavour kwaye ipheka kunye ne-pasta. Yongeza incasa eninzi kwesi sidlo. Isoseji etshayiweyo ingasetyenziswa xa ukhetha.
IPASTA: IPenne yipasta enkulu kuba iityhubhu zibamba isosi yetshizi eninzi. Nayiphi na ipasta medium ezifana itayi webhowu , rotini, nkqu isikruru izakusebenza.
Unokudinga ukulungelelanisa ixesha lokupheka (kwaye wongeze amanzi amancinci) ukuba utshintsha ipasta.
ISOSI: I-pasta ipheka ngokufanelekileyo kwi-sauce kunye nesoseji. Izitatshi ezisuka kwipasta zinceda ukujiya ngelixa iincasa kwisosi zincamathele ngokwenene kwipasta.
Qinisekisa ukususa i-sauce ekushiseni ngaphambi kokuba uqhube kwi-cheese, ukushisa okukhulu kunokubangela ukuba i-sauce ihlukane.
Itshizi iya kutyebisa isosi ukuze uqinisekise ukuba unentwana yolwelo phambi kokuba wongeze itshizi. Ukuba i-sauce iyancipha kakhulu, ungaxuba intwana yomhluzi.
Uyenza njani iPasta yesoseji yetshizi
Isoseji eBrown kunye netswele kwimbiza enkulu.
Yongeza zonke izithako eziseleyo kwibhodwe elifanayo kwaye udibanise de i-pasta ithambile.
Susa i-sausage, isilayi, kwaye ubuyisele embizeni. (Njengeresiphi engezantsi)
Gxuma kwiitshizi de unyibilike. Uhombise ngeeshizi ezongezelelweyo.
Ukuba unqwenela, le nto inokugqithwa nge-crumb topping kunye ne-broiled imizuzu emi-2. Lungiselela i-pasta njengoko kuyalelwe kwaye udibanise iipunipopu ezi-2 zesonka esinesonka kunye ne-tablespoon ye-1 yebhotela. Fafaza ngaphezulu kunye ne-broil.
Gcina intsalela epholileyo kwisitya esivaliweyo kwifriji ukuya kwiintsuku ezi-3. Phinda ufudumeze kwi-stovetop okanye kwi-microwave. Isoseji enetshizi yepasta incasa ngcono kusuku olulandelayo kwaye iyindlela enentliziyo yokomeleza isikolo okanye usuku lomsebenzi!
yeyiphi imibala ongayinxibi emtshatweni
Imbiza enye yePasta izitya
I-Pasta yePot enye eneNkukhu – ilungile kwimizuzu engama-30
I-Cheeseburger Macaroni eyenziwe ekhaya -indlela engcono kunoMncedi weHamburger
I-Pasta yeRotini enye -isidlo sasebusuku esigqibeleleyo
Inkukhu yePasta yeTomato eCreamy – iyazaliseka kwaye inencasa
I-Lasagna elula – intandokazi yosapho
I-Ravioli elula - kunye ne-creamy tomato sauce
Ngaba usapho lwakho lwaluyithanda le Pasta yeSoseji? Qinisekisa ukuba usishiye umlinganiselo kunye nenkcazo apha ngezantsi!
4.8ukusuka10iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha LokuphekaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha elipheleleyo30 imizuzu Iinkonzo6 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Esi sidlo sepasta esityebileyo nesinekhrimu singcamla njengemac & netshizi, kodwa silayishwe ngamaqhekeza esoseji yaseTaliyane!
▢½ iponti Iikhonkco zesoseji zaseTaliyane
▢Nye itswele yenziwe kakuhle
▢Mbini iikomityi ubisi
▢1 ½ iikomityi umhluzi wenkukhu okanye amanzi
▢1 ½ iikomityi ipeni engaphekwanga
▢Nye icephe cornstarch
▢Nye icephe ngalinye umgubo ikonofile, iswekile, ipaprika, kunye ipepile
▢Nye indebe itshizi ye-cheddar iqhekeziwe
▢½ indebe itshizi ye-gruyere iqhekeziwe
▢½ indebe itshizi yeparmesan iqhekeziwe
▢ityuwa kunye nepepile ukunambitha
Kwimbiza enkulu phezu kobushushu obuphakathi, isoseji yaseTaliyane emdaka kunye netswele.
Yongeza ubisi, umhluzi, kunye ne-pasta embizeni kunye ne-sausage kunye netswele. Gxotha i-cornstarch kunye ne-seasonings kwaye uzise kwi-thumba.
Emva kokubilisa, nciphisa ubushushu ukuze udibanise kwaye ugubungele, kwaye upheke imizuzu eyi-10-16 okanye de kube i-pasta ithambile. Jonga i-pan rhoqo kwaye wongeze amanzi amaninzi okanye umhluzi njengoko kufuneka.
Emva kokuba i-pasta ithambile, susa imbiza ekushiseni. Susa i-sausage embizeni kwaye usike.
Gxuma i-cheese kwi-pasta de inyibilike. Gxuma kwi-sausage egayiweyo kwaye usebenze.
Unokufuna ukulungelelanisa ixesha lokupheka ukuba utshintshe ipasta kwenye imilo. Gxuma kwi-cornstarch ngaphambi kokuba ulwelo lutshise. Ipani ebanzi inokubangela ukuba ulwelo lube ngumphunga ngokukhawuleza ukuze ungongeza intwana yomhluzi okanye amanzi xa kukho imfuneko. I-Grate i-cheese kwibhloko, i-cheeses e-pre-shredded ayisebenzi kakuhle kule recipe. Susa i-sauce ekushiseni ngaphambi kokuba udibanise i-cheese. Iishizi ziya kutyebisa i-sauce ukuze uqinisekise ukuba unolwelo oluthile ngaphambi kokuba wongeze. Ukuba i-sauce iyancipha kakhulu, ungaxuba intwana yomhluzi.
Iikhalori:440,Iicarbohydrates:30g,Iprotheyini:23g,Amafutha:25g,Amafutha aGqithisiweyo:12g,Amafutha ePolyunsaturated:Mbinig,Amafutha e-Monounsaturated:9g,ICholesterol:70mg,Isodium:816mg,Potassium:385mg,Ifayibha:Nyeg,Iswekile:6g,IVithamin A:514IU,Ivithamin C:6mg,Ikhalsiyam:464mg,Iayini:Nyemg
(Ulwazi lwezondlo olunikeziweyo luqikelelo kwaye luya kwahluka ngokusekelwe kwiindlela zokupheka kunye neempawu zezithako ezisetyenzisiweyo.)
IkhosiIsidlo sakusihlwa, i-Entree, iKhosi ePhambili, iPasta
Iziqinisekiso I-Gem Stones And Gem Stone Jew Jewelry Umtshato Womtshato Imihla Yokuqala Umdaniso Umdlalo Weslides
Ukuhlala Ixesha Elide
Yintoni Ye Ngaphandle
Ukukhetha I Camera
Inja Ingcali Udliwanondlebe
ivesi yebhayibhile yokulahlekelwa ngumama
Hlamba kwaye uhambe ngeenwele ngaphezulu kwe-50
ezona mpahla zintle zabafana abafikisayo
zingakanani ukuphakama kwezithende ezongeziweyo
Ukhuseleko Bucala Nokukhuselwa
Isondlo Kunye Ukutya Ukutya